နှလုံးသား ဝန်ဆောင်မှု (သို့) အသိပေးတဲ့ စာတစ်ပုဒ် - Thutazone
နှလုံးသား ဝန်ဆောင်မှု (သို့) အသိပေးတဲ့ စာတစ်ပုဒ်
By ThutammPosted on February 18, 2018
ရေးသားသူ – နိုင်းနိုင်းစနေ
လေကြောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို လူအများက လှပသေသပ်စွာ ဝတ်ဆင်ထားသည်ဟုသာ မြင်ကြပြီး အားကျကြသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ဘဝတွင် လူတွေမမြင်နိုင်သော အခက်အခဲများလည်း ရှိတတ်သေးသည်။ အချိန်ပိုအလုပ်တွေ လုပ်ပြီး အနားယူ မအိပ်စက်ရသည့်အပြင် လေယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်လာသည့် ခရီသည်ပေါင်း ရာကျော်အတွက် အစားအစာများ ပြင်ဆင်ပေးရသလို အခွန်မဲ့ပစ္စည်းများလည်း ရောင်းချရသေးသည်။
ကျွန်မတို့ဘဝကို သေချာခံစားကြည့်လျှင် လူနှစ်ယောက်စာ အလုပ်လုပ်နေရသည်ဟု ထင်ရသည်။ တစ်ခါတရံ စိတ်ပမ်းကိုယ်နွမ်းပြီး ငိုချင်သော်လည်း မျက်ရည်ကမထွက်။
“ကိုယ်ဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၊ ဒီတစ်ရက်လေးကို သည်းခံမှုတွေနဲ့သာ ကုန်ဆုံးပါစေလေ” ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲပြောဆိုဆုံးမဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုပင် ဆုံးမသော်လည်း တစ်ခါတရံ စိတ်၏ဆုံးမမှုများကို ဦးနှောက်က လက်မခံသောအခါ မျက်နှာပေါ်တွင် အပြုံးတုတွေ ဆင်မြန်းပြီး စိတ်မကြည်လင်စွာ ရှိနေတတ်သည်။
တစ်ခါက လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကျွန်မ၏အကောင်းဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးက ဝမ်းတွင်းရူးရောဂါ စွဲကပ်နေသော အဘိုးအိုတစ်ဦးအား မည်သို့ပြုစုလိုက်သည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံလိုက်မှ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဘယ်လောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုကြောင်း သင်္ခန်းစာ ကောင်းကောင်းရလိုက်သည်။
“စင်ကာပူ-နယူးယောက်” လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။
လေယာဉ်တက်ပြီး သိပ်မကြာပါ။ အဘိုးအိုတစ်ဦး အပေါ့အပါးသွားချင်လာသည်။ အကြင်နာတရား ကင်းမဲ့သော သူ့အိမ်သားများက အဘိုးအိုကိုယ်တိုင် အိမ်သာသို့ သွားစေခဲ့သည်။ သနားစရာအဘိုးအိုမှာ လေယာဉ်နောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော အိမ်သာသို့ တစ်ယောက်တည်း ဖြေးဖြေးချင်း လျှောက်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် အိမ်သာကထွက်လာပြီးမှ မိမိထိုင်ခုံနေရာကို မမှတ်မိဘဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ (၈ဝ)ဆိုသည့် မိမိအသက်ကိုမှ သတိမထားမိတော့ဘဲ ချောက်ချားစွာ လူသွားစင်္ကြန်တွင် ထိုင်ငိုတော့သည်။ လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများ ရောက်လာမှ သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် အညစ်အကြေးများ ပေနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ သူအသုံးပြုခဲ့သော အိမ်သာမှာလည်း လူမြင်မကောင်းအောင် ညစ်ပေနေသည်။
အဘိုးအိုကို ဝန်ထမ်းများက ထိုင်ခုံသို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့ကိုယ်ပေါ်ရှိ အညစ်အကြေး အနံ့ဆိုးများက ဘေးမှခရီးသည်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အဘိုးအိုအား အဝတ်လဲပေးရန် အိမ်သားများကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အဝတ်သေတ္တာမှာ လေယာဉ်ဂိုဒေါင်ထဲ ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့လေယာဉ်မှာ ခရီးသည်အပြည့်တင်ဆောင်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် အဘိုးအိုအား လွတ်နေသော နောက်ဆုံးနေရာတွင် ထိုင်ခိုင်းစေရန် အိမ်သားများက တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်လည်း နေရာလွတ်များ ရှိနေသောကြောင့် အိမ်သားများ၏ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျောခဲ့ရသည်။ ညစ်ပေနေသော အိမ်သာကိုလည်း သော့ခတ်ထားလိုက်ကြသည်။
အဘိုးအိုမှာ နောက်ဆုံးခုံတွင် တစ်ယောက်တည်း ခေါင်းငုံ့ထိုင်လျှက် ဝန်ထမ်းများချပေးသော အစားအသောက်များကို မျက်တောင်မခတ်တမ်းကြည့်ရင်း မျက်ရည်ကျနေသည်။ သို့သော် တစ်နာရီအကြာ မည်သူမျှ သတိမထားမိလိုက်ချိန်တွင် အဘိုးအိုမှာ သန့်ရှင်းသော အဝတ်အစားများ ဝတ်ကာ မိမိနဂိုနေရာတွင် ပြုံးရယ်စွာထိုင်နေပြီး အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်းထနေသော အစာများ စားသောက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
လူအများက တအံ့တသြနှင့် အဖြစ်အပျက်ကို သိချင်နေကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်မ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းက သူမ၏ထမင်းစားချိန်ကို အသုံးချပြီး အဘိုးအိုအား အဝတ်စိုများဖြင့် သန့်စင်ပေးခဲ့သည်။ လေယာဉ်မှူးထံ အဝတ်တစ်စုံငှားပြီး အဘိုးအိုအား လဲပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သော့ခတ်ထားသော အိမ်သာကိုလည်း သန့်စင်ပြီး သူမအမြဲသုံးနေကျ ရေမွှေးဖြင့် ပက်ဖြန်းထားလိုက်သည်။
ဝန်ထမ်းတချို့က သူမအား တုံး,အသည်ဟု လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုကြသည်။ သူမ၏ ကူညီမှုကို လူများက အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ မှတ်မိကြမှာ မဟုတ်ကြောင်းပြောသည်။
“ပျံသန်းချိန် ၁ဝနာရီတောင် ကျန်သေးတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်မသာ အဲဒီအဘိုးအို နေရာမှာဆိုရင် ညစ်ပတ်တဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ အနေရာခက်လိမ့်မယ်။ ခရီးအစမှာ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူမျှော်လင့်မလဲ? နောက်ပြီး လူ၃ဝနှုန်းနဲ့ အိမ်သာတစ်လုံးကို သုံးကြရတယ်။ အိမ်သာတစ်လုံးလျှော့သွားတာနဲ့ ပိုအခက်အခဲ ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မကူညီလိုက်တာပါ။ ဒါလည်း ကျွန်မတို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား?” လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး သူပြန်ပြောခဲ့သည်။
သူမစကားကို ကြားပြီး အလုပ်အပေါ် ကျွန်မအလေးမထားမိခဲ့သည်များကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ် ရှက်ရွံ့မိသည်။ ယခင်က သူမပြောခဲ့သော စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်မသတိရလိုက်မိသည်။
“ရှေးရှေးတုန်းက ကုသိုလ်အရဆုံးအလုပ်က ဘာလဲသိလား? လူတွေကို နေရာတစ်နေရာကနေ နောက်တစ်နေရာကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ “ကူးတို့” အလုပ်ပဲ။ သူတို့သွားမယ့်နေရာဟာ ဝမ်းသာတာတွေ၊ ဝမ်းနည်းတာတွေ စောင့်နေပါစေ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်မှ သူတို့အတွက် ကောင်းသောစတင်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာမှာ။ ဒါကြောင့် အခုလို ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ခွင့်ရနေတာ အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ဒီကံကောင်းခြင်းတွေကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတတ်ရမယ်။ တစ်ခြားလူကို ကောင်းတာတွေ မျှဝေတာဟာလည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား?”
ဝန်ဆောင်မှုကို သာမန်အလုပ် သဘောဖြစ်သာ ကျွန်မထင်မြင်နေချိန်တွင် သူမက ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုအဖြင့် လူတွေ၏ နှလုံးသားထဲ ထိခိုက်နာကျင်မှုမရှိဘဲ ကြိုးစားပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။
ရက်များမကြာမီ ဘန်ကောက်မှ စင်ကာပူသို့ပြန်သော လေယာဉ်တစ်စီးပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ညစာစားချိန်တွင် အမေအိုတစ်ဦးသည် သူ့ကိုတည်ခင်းဧည့်ခံသော အစားအသောက်များကို မစားဘဲ ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
“အစာနှင့် မတည့်လို့လား? လေယာဉ်မူးပြီး နေထိုင်မကောင်းလို့လား အမေ” ဟု ကျွန်မမေးလိုက်သည်။
အမေအိုမှာ ကျွန်မကို အားနာစွာတစ်ချက်ကြည့်ပြီး လေသံတိုးတိုးဖြင့်…
“ဒါ အမေပထမဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်စီးဖူးတာပါ။ ဒီအစားအသောက်တွေကို အမေစားလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ့မြေးက လေယာဉ်တစ်ခါမှ မစီးဖူးလို့ ဒီအစားတွေယူပြီး အမေ့မြေးလေးကို ကျွေးချင်လို့ပါ”
အမေ့စကားကြားတော့ ကျွန်မနွေးထွေးစွာ ပြုံးလိုက်မိသည်။
“ကိစ္စမရှိဘူး အမေ.. အမေသုံးဆောင်လိုက်ပါ။ နောက်မှ အမေ့မြေးအတွက် ကျွန်မသပ်သပ် ထည့်ပေးလိုက်မယ်” ကျွန်မစကားကိုကြားမှ အမေအိုမှာ ဝမ်းသာအားရ သူ့အစာကို စားတော့သည်။ လေယာဉ်နောက်ခန်းကိုရောက်တော့ ကျွန်မအတွက်ချန်ထားသော အစားအစာများကို သေချာစွာ ထုပ်လိုက်မိသည်။
“ဒီနေ့လေယာဉ်တစ်စီးလုံး အပြည့်ပဲ။ စားစရာ အပိုမကျန်ဘူး။ ဘာလို့ ကိုယ့်ဝေစုကို ပေးလိုက်ရတာလဲ” လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးက နားမလည်စွာမေးသည်။
“ကျွန်မတို့က လူငယ်တွေလေ.. အဆာခံနိုင်သေးတယ်။ လေယာဉ်ဆင်းမှ အိမ်ပြန်စားလို့ရတယ်။ လူအိုတွေက အဆာမခံနိုင်ကြဘူး”
တကယ်တမ်း ကျွန်မစိတ်တွင် တွေးမိသည်က အမေအိုမှာ ကျွန်မဝန်ဆောင်လိုက်သော ခရီးသည် ထောင်ပေါင်းများစွာထဲက တစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမေအိုသာ နောက်တစ်ကြိမ် နိုင်ငံခြားထွက်ခွင့်၊ လေယာဉ်စီးခွင့် မကြုံခဲ့လျှင် ယခုအကြိမ်သည် သူမအတွက် ပထမနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံခြားသို့ ခရီးထွက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤခရီးစဉ်သည် သူမဘဝ တလျှောက်လုံးအတွက် အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မသည်လည်း သူမ၏အမှတ်တရတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။
စေတနာရှိရှိ လုပ်ပေးလိုက်ရခြင်းမှာလည်း ကုသိုလ်တစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလား? လူအများကို အခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ ရောင်းချနေသလို ကျွန်မတို့၏ စိတ်ရင်းစိတ်ကောင်းများကိုလည်း မျှဝေပေးချင်သေးသည်။
ကျွန်မနေ့တိုင်း လုပ်နေသောအလုပ်နှင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသူများအတွက် ကျွန်မတကယ်စေတနာ ထားနိုင်ခဲ့ပြီလား? စေတနာဖြင့် ကျွန်မ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကို ကျွန်မအမြဲ ပြန်စဉ်းစားမိသည်။
လူတွေ စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ကျွန်မဟာ နတ်သမီးလား?
ဒါမှမဟုတ် လူတွေရဲ့အပြုံးကို မောင်းထုတ်တတ်တဲ့ နတ်ဆိုးလား?
အလုပ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဘဝတွင်ဖြစ်စေ၊ ယနေ့သော်လည်းကောင်း၊ မနက်ဖြန်သော်လည်းကောင်း… အနာဂတ်အတွက် ကျွန်မရွေးချယ်မိသည်မှာ “နှလုံးသားဝန်ဆောင်မှု”ပင်ဖြစ်သည်။
Previous post မြန်မာ့ငွေ သမိုင်းကြောင်း
Next post ကိုကိုးကျွန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ